on: 02 May, 2018
လူအများစုဟာ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတာနဲ့တင် ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဂရုပြုအလေးပေးဖို့အတွက် မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ “ခလုတ်ထိမှ အမိတ” ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးအတိုင်းပဲ ခန္ဓာကိုယ်တစ်စုံတစ်ရာ ချို့ယွင်းလာတဲ့အခါမှသာ ဂရုပြုမိတတ်ကြပါတယ်။ခုုခေတ်မှာဆိုရင် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ ဘယ်လိုစားသောက်မလဲ ဆိုတာတွေက ပိုပြီး အရေးပါလာပါတယ်။ မပြည့်စုံတဲ့ အာဟာရနဲ့ အစားအသောက်၊ ကျန်းမာရေ...
on: 30 Apr, 2018
1. နေရောင်အောက်တွင်အကာအကွယ်မပါပဲသွားခြင်း2. နေရောင်ခြည်လုံလောက်စွာထိတွေ့မှုမရှိခြင်း-နေရောင်အောက်တွင်အကာအကွယ်မပါပဲအပြင်ထွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အလွန်ပူပြင်းသောနေရောင်ခြည်ကို့အကာကွယ်မပါပဲအသားရေနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းဟာသင့်အသားရေကိုပျက်စီးစေသကဲ့သို့ နေရောင်ခြည်လုံလောက်စွာထိတွေ့မှုမရှီတာဟာလည်းအသားအရေကိုပျက်စီးစေတက်ပါတယ်။3. ဆပ်ပြာများအသုံးပြုမှု-ကျွန်တော်တို့လူနေ...
on: 21 Apr, 2018
ဆားဝက်ခြံ(၂)မျိုးရှိပါတယ်။ အဖြူရောင်ဆားဝက်ခြံနှင့် အမည်းရောင်ဆားဝက်ခြံတို့ဖြစ်သည်။အဖြူရောင်ဆားဝက်ခြံ (White Heads)ဆဲလ်အသေနဲ့ အဆီပိုတွေ မွှေးညှင်းပေါက်မှာ စုပုံပိတ်ဆို့ပြီး အဖုသေးသေးလေးတွေဖြစ်နေတာပါ။အဖုလေးတွေက အရေပြားအတွင်းမှာစူထွက်နေတာမျိုး ရှိသလို အရေပြားအောက်မှာလည်းရှိနေတက်ပါတယ်။အမည်းရောင်ဆားဝက်ခြံ (Black Heads)အမည်းရောင်ဆားဝ...
on: 10 Apr, 2018
၁။ ကြမ်းပြင်လို အမာခံရှိတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဖျာခင်းပြီး ပက်လက်အိပ်လိုက်ပါ။ မျက်လုံးကို မှိတ်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို တစ်ဝက်ဖြန့်ကာ ခန္ဓာကိုယ် နံဘေးမှာ ဖြေလျှော့ပြီးချထားပါ။ ခြေထောက်များကိုလည်း အနည်းငယ်စီ ခွဲထားပါ။ခြေချောင်းကလေးများက အပြင် ဘက်သို့ ညွှန်လျက် အနေအထားမှာ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ပြီး ခြေချောင်းကလေးများအပေါ် အာရုံစိုက်ထားပြီး ဖ...
တစ်ကယ် ပိန်ချင် သူများ အတွက် (၇)ရက်တွင်း ပိန်နည်း
on: 30 Mar, 2018
တကယ် ပိန်ချင် သူများ အတွက် ဆေးဝါး အကူ မလိုဘဲ၊ မိမိ ဖာသာ အစား အသောက် ဖြင့် ဝိတ်ချ လို့ရတဲ့ နည်းလမ်း ကောင်း ရှိပါတယ်။ ဒီနည်း က ရက် သတ္တ ( ၁ ) ပတ် အတွင်း ကိုယ် အလေးချိန် ၆ မှ ၈ ကီလို ထိ ကျစေ တဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်တယ် လို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လ ( ၄ ) ရက် နေ့စွဲပါ American Health Digest မှာ ဖော်ပြ ထားခဲ့ ပါတယ်။ သို့သော် ( ၇ ) ရက် တိတိ သူ့အညွှန်း အတိုင်း လိုက်နာ နိုင်မှသာ ကိုယ် အလေးချိန် သိသိ သာသာ လျေ...
on: 21 Mar, 2018
ဆံသားတွေကိုမလိုအပ်ဘဲ ခြောက်သွေ့တာ၊ပျက်စီးတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့အတွက် သင်္ကြန်တွင်း ဆေးဆိုးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ မဆိုးခင်ကတည်းက အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဆံသားလှပကျန်းမာနေမှုကသာ သင့်ဆံသားတွေရဲ့ စစ်မှန်တဲ့လှပခြင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။၁။ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖတ်ဖို့မမေ့ပါနှင့်ဆံသားတွေ ဆေးမဆိုးခင်အချိန်မှာ အရင်ဆုံးလိုက်န...
လေ့ကျင့်ခန်းမှန်သမျှ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ပံံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပေးမယ့် ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြွက်သားများရဲ့ ကျုံ့နိုင်ဆံံ့နိုင်တဲ့ သတ္တိတွေကို မြှင့်တင်ပေးရာရောက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ဝမ်းမှန်စေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြွက်သားများကို သန်မာစေတဲ့အပြင် ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းက အဆီများကို ကွယ်ပျောက်စေနိုင်ပါ...
မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းများနှင့် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်သော အလှအပဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ
on: 21 Feb, 2018
(၁) ဒိန်ချဉ်အသားအရေအတွက် ဒိန်ချဉ်က အိမ်တိုင်းမှာ အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်တဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း တစ်ခုပါ။ ဒိန်ချဉ်ကို အသုံးပြုပြီး မျက်နှာနှင့်ဆံပင်ပေါင်းတင်တာကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်လက်ဖက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်းကို ပျားရည်၊ သံပရာရည်တို့နဲ့ ရောမွှေပြီး မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းကို လိမ်းပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက်ထားပြီးမှ ရေနဲ့သန့်စင်အောင် ဆေးကြောပါ။ အသားအရေကို သန့်စင်စေပြီ...
Acne ဒါမှမဟုတ် Pimples ဝက်ခြံဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ အမွှေးပေါက်ရာအိတ် တနည်း ပြောရရင် အပေါက်မှာ အဆီနဲ့ ပျက်စီးသွားတဲ့ အရေပြား (ဆဲလ်) တွေ ပိတ်တာကနေ ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာကို ဗက်တီးရီးယားတွေက ကြိုက်ကြတယ်။ ဒီအကောင်တွေ ဝင်လာရင် ခေါင်းနီ နဲ့ အနီပေါ် အဖြူဆင့်တွေ ဖြစ်လာတော့တယ်။Whiteheads ခေါင်းဖြူ နဲ့ Blackheads ခေါင်နက်တွေက သာမန်အစားတွေ ဖြစ်တယ်။ အသင့်အတင့် ဆိုးတာက နီရဲပြီး ရောင်နေတဲ့...
အကြည့်တစ်ချက်မှာတင် ငေးသွားစေမယ့် မျက်တောင်မွှေးထူထူလေး သဘာဝနည်းလမ်းအတိုင်း ထိန်းသိမ်းမယ်
on: 21 Jan, 2018
မျက်လုံးလေး တစ်ချက်အဝင့်မှာ ငေးသွားအောင်လှတဲ့ အလှမျိုးကို ပျိုမေတိုင်းလိုချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်တောင်မွှေးတွေ ရှည်စေဖို့ စျေးကြီးတဲ့ Treatment တွေ၊ ဓာတုပစ္စည်းတွေမပါဘဲ သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ မျက်ခွံနဲ့ မျက်ခမ်းကို ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးမယ် မျက်နှာပေါ်မှာ သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေဖို့နဲ့...